Nhau - Mushure mekuverenga izvi, unotsunga kunwa kofi zuva rega rega nekapu yakavharwa pepa kapu?
Mushure mekuverenga izvi, iwe unotsunga kunwa kofi zuva rega rega ne PE yakavharwa pepu kapu?
Kune vanhu vazhinji, kutanga kwakanaka hafu yehondo. Basa remangwanani rinotanga mushure mekapu yekofi inopisa ... Panguva ino, caffeine inosunga kune imwe inogamuchira muuropi, ichiita kuti huropi husakwanise kugamuchira "kuneta" zviratidzo, saka zvinopa vanhu kukurudzira kwesimba simba.
Nekudaro, chidzidzo chitsva chakapa yambiro: kushandiswa kwenguva refu kwemakapu epepa anoraswa kunwa kofi inopisa kana zvinwiwa zvinopisa, kusanganisira kudya (kupisa) mumabhokisi emasikati anoraswa, kuchabhadhara mutengo wehutano.
Mune chidzidzo chitsva chakaburitswa mu 《Zvinyorwa zveZvinokuvadza Zvinhu (IF = 9.038), timu yekutsvaga kubva kuIndia Institute of Technology yakawana kuti kofi inopisa kana zvimwe zvinwiwa zvinopisa mumakapu epepa anoraswa mukati memaminitsi gumi nemashanu Makumi ezviuru zvezvinhu zvinogona kukuvadza kuburitswa muchinwiwa, zvinoti mapurasitiki ...
Isu tese tinoziva nezve micro plastiki. Mumakore achangopfuura, nekugadzirwa kwakawanda uye kushandiswa kwepurasitiki, iko kusungwa kwemapurasitiki madiki mune zvakatipoteredza akaenderera mberi kuwedzera. Micro kusvibiswa kwepurasitiki rave dambudziko repasi rose rezvakatipoteredza pamwe neoneone kupera, gungwa acidification, uye shanduko yemamiriro ekunze.
Vanotsvagurudza vakati idzi dzinenge dzisingaonekwe mapurasitiki madiki ave kutyisidzira hutano hwevanhu. Pakutanga gore rino, timu yekutsvaga yeUS yakawana mapurasitiki madiki munhengo dzevanhu kekutanga. Vanhu vari kunetsekana kuti kusvibiswa uku kunokonzera cancer kana kushaya mbereko. Zvidzidzo zvakaratidza kuti micro plastiki kusvibiswa kunogona kukonzera kuzvimba mumhuka.
Munyori anowirirana pakudzidza uku, Dr. Sudha Goel, Chikoro cheSainzi Sayenzi neUinjiniya, Indian Institute of Technology, akati: "Kapu kapu yakazadzwa nekofi inopisa kana tii inopisa ichadzikisira microplastic layer mumukombe mukati memaminitsi gumi nemashanu. "inozodzikisira ma micrometer zviuru makumi maviri neshanu muhukuru. Iwo masaga anonunurwa muzvinwiwa zvinopisa. Munhuwo zvake anonwa makapu matatu eti kana kofi mukapu yemupepa inoraswa zuva rega rega achamwisa mapurasitiki e75,000 asingaonekwe neziso rakashama."
Zvinofungidzirwa kuti gore rapfuura, vagadziri vemukombe wemapepa vakaburitsa makapu emapepa anosvika mabhiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemana, mazhinji acho anoshandiswa tii, kofi, chokoreti inopisa, uye kunyange muto. Iyi nhamba yakaenzana nemakumi matatu nemashanu makapu epepa pamunhu pasi.
Kuenderera mberi kwekuwedzera kwehuwandu hwepasi rose hwekutora masevhisi kwakasimudzirawo kudiwa kwezvinoraswa zvigadzirwa. Muhupenyu huri kuwedzera kubatikana nebasa, kuraira kuendeswa kwechikafu kwave kuita kwezuva nezuva kune vanhu vazhinji. Mabhokisi emashizha anoraswa anoraswa nekukasira kana ashandiswa kumusoro, uye kazhinji haana huipi hwakashata pane zvakatipoteredza sepurasitiki nemidziyo ye styrofoam. Zvakangodaro, Sudha akadaro, izvi zviri nyore zvinouya nemutengo.
Vatsvakurudzi vakawedzera kuti: "Mapurasitiki madiki anoita sevatakuri vezvinhu zvinosvibisa, zvakaita seion, chepfu inorema simbi senge palladium, chromium uye cadmium, uye makemikari makemikari ari hydrophobic uye anogona kupinda muhushe hwemhuka. Kana ikamedzwa kwenguva yakareba, hutano hunogona kukanganisika. Zvakakomba kwazvo. "
Unyanzvi hwekuparadzanisa makemikari hwaratidza mapurasitiki madiki mumvura inopisa. Chinonyanya kunetsa, kuongororwa kwefirimu repurasitiki kwakaratidza kuvapo kwesimbi inorema mumutsara.
Unogona kuona kuti mhedzisiro yekuyedza iri pamusoro "inokatyamadza", saka pane chero chigadzirwa chingatsiva PE yakavharwa makapu emapepa?
Mhinduro ndeyokuti hongu! EPP mapepa makapu, OPB masikati bhokisi dzakateedzana, nezvimwewo, zvakapfuudza zvachose kuyedzwa uye kupihwa zvitupa zvevane masimba (hutachiona hwekuongorora hutachiona, kuongororwa kwePOP fluorine, kuongororwa kwekutama, nezvimwewo), uye unogona kuva nechokwadi chekuti mapurpiti kana bepa rakashandiswazve rinogona kushandiswazve. Koshesa composting, ziva zviwanikwa marara uye shandisa yakachengeteka uye zvakatipoteredza zvine hushamwari mapurasitiki. Mapepa makapu akagadzirwa nawo anogona kutsiva zvakakwana PE yakavharwa mapepa makapu.